Invitation for Bids No: 1/ICB/MY-P20/ESE/2020
1. The Government of the Republic of the Union of Myanmar has receivedaloan from Japan International Cooperation Agency (JICA) toward the cost of Power Distribution System Improvement Project in Major Cities. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the Contract for Procurement of Power Distribution System Improvement Project in Major Cities, Package4Procurement of Reliability Improvement Equipment for Distribution Line.
https://www.moee.gov.mm/mm/ignite/contentView/3678 တွင် ဖြည့်စွက်အသိပေးထားချက်အား ထပ်မံထည့်သွင်းထားပါသည်။
Download Link : 1-T-ICB-MPP20-ESE-2020.pdf
- လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) (၂၂ / ၂၀၂၀-၂၀၂၁)
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရှိ National Control Center (NCC) ၊ ၂၃၀ ကေဗွီ နေပြည်တော်(၂)ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံနှင့် ၂၃၀ ကေဗွီ ပျဉ်းမနားပင်မဓာတ်အားခွဲရုံတို့သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပဥ္စမအကြိမ် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန် အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေ၊ ရရှိ၊ ထုတ်ပေး၊ လက်ကျန်စာရင်း ( ၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ) မှ (၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ) ထိ
တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၁၆.၁၁.၂၀၂၀)